BDị ụgbọ ala GD-Urban, GD- Cross Country Bicycle, GD-Kids Supplies- GUODA
Ụgbọala GD-City/Urban Road
Ọkachamara n'ichepụta igwe na azụmaahịa, GUODA (Tianjin) sayensị na teknụzụ mmepe Inc. na -arụpụta ụdị ịnyịnya na ụdị igwe eletrik niile, na -achọ ahụmịhe ịnya ụgbọ ala ka mma na ndụ kwa ụbọchị. Na 2007, anyị gbara mbọ mepee ụlọ ọrụ ọkachamara iji rụpụta igwe eletrik. Na 2014, GUODA Inc. guzobere na Tianjin, obodo ọdụ ụgbọ mmiri azụmaahịa kacha ukwuu na Northern China. Na 2018, nke sitere na "Belt and Road Initiative" Ie "Silk Road Economic Belt na 21st-Century Maritime Silk Road", GUODA (Africa) Limited guzobere iji nyocha ọzọ n'ahịa mba ụwa. Ugbu a, ngwaahịa anyị na -enweta nnukwu ewu ewu n'ụlọ na mba ofesi. Anyị na-achọ ịbụ onye mmekọ azụmahịa gị na-eguzosi ike n'ihe na ịmepụta ọdịnihu dị ebube nke ga-emeri!
GD-Tour / Trekking / Cross Country Bicycle nke nwere ike imeghari ọnọdụ okporo ụzọ niile ma ha ga-enye gị ahụmịhe ịnya ịnya.
Ụgbọ ịnyịnya n'okporo ụzọ GUODA bụ nhọrọ dị mma maka ndị bi n'obodo ukwu ịgbanahụ mkpọchi okporo ụzọ wee bie ndụ nwere obere carbon, n'otu oge na-erite uru na usoro njem ọha.
Ụgbọ ala ụmụaka GUODA sitere na teknụzụ azụmahịa nke nchekwa na nkasi obi. Anyị nwere ike ịnye ọrụ ahaziri iche. A haziri mmepụta anyị dị ka okirikiri nwata si eto, nke nwere ike wetara nwata ahụmịhe zuru oke.
Nabata na webụsaịtị anyị
Jiri igwe igwe GUODA nye ohere njem na ndụ dị oke mma.
Malite ỌZỌ ỌZỌ
EMB028: igwe eletriki igwe eletriki igwe eletriki nke nwere lithium ...
Nkọwapụta ngwaahịa JSY 200+65+65MM ndụdụ JG Al akpọchiri ndụdụ 210MM Handlebar JIABAO aluminum riserbar Brake 160MM disc brake lithium powered bike Crank set Prowheel Alunimum 3 PCS 42T Freewheel 8S na -etinye Pedal JYD 20X Al na bọọlụ Taya KENDA 26*1.95 AV Motor NTF 36*135*185mm/36V300W Shifter F: SHIMANO M310-3 R: SHIMANO M310-8S Derailleur F: SHIMANO TY300/34.9 R: SHIMANO TY500 B ...
GD-EMB-029: 26 ”igwe eletriki igwe eletriki wi ...
Nkọwapụta ngwaahịa 27.5*3.0 alloy aluminom nwere batrị n'ime ndụdụ 700C mkpọchi mkpọchi Mudguard 700C PVC Handlebar 700mm riser handlebar Headset Ụdị zoro ezo 8pcs Brake lever 4 mkpịsị aka Brake cable F: 800/200MM R: 1300/1500MM F.brake 160MM disc breeki R. breeki 160mm diski breeki Crank Al 170MM 40T Axle NECO 120MM axle akara Chain 8S Freewheel SHIMANO G20-8 Pedal Al Tire KENDA 700C*28C tube ime KENDA 700C*28C butyl roba F.axle 36 oghere Al kaadị -...
GD-MTB-064: 26 ”igwe kwụ otu ebe mpịachi, ugwu ugwu ...
Nkọwapụta Ngwaahịa 26 inch steel diski breeki ndụdụ 31.8*200mm Handlebar 600*31.8mm ogologo aka nri F.derailleur Microshift 24S R.derailleur Microshift 24S Shifter Microshift 24S Brake XT breeki Saddle 3705 PVC oche post 31.8 Alloy Tire COMPASS 26*1.95 K1153 Inner. tube 26*1.75 Butyl roba A/V Rim & kwuru Integrated Mg alloy Flywheel 8S positioning crank set 3 pcs 24/34/42 Pedal YH-183 na bọọlụ Chain 8S na-edobe ngwugwu ụgbọ ala ...
GD-MTB-063: icnhes igwe kwụ otu ebe ugwu, igwe nchara ...
Nkọwapụta ngwaahịa Ntọala 24 inch MTB diski breeki ndụdụ 24 ″*25.4*22.2*27*210L nkwusioru enweghị aka Handlebar steel riser-bar 600W*22.2*31.5*1.4T F.derailleur ∮31.8 R.derailleur SHIMANO TZ500 Shifter 21S shifter F: 1800 R: 2050 Breeki REPUTE DSC310 Taya 24 '*2.125 Inner tube 24'*1.95-2.125 A/V Butyl roba Rim 24 '*1.75 ″*14G*36H A/V nwere akara ahaziri Hub F: 14G*3/8*36H /100W*140L R: 14G*3/8*36H/135W*175L Flywheel 7S positionin ...
GD-MTB-062: 29 anụ ọhịa igwe kwụ otu ebe, 29 ...
Akụkụ nkọwapụta ngwaahịa 29 sentimita MTB Al alloy Fork 29 inch diski diski breeki Handlebar Steel riser-bar 680W*22.2*31.8*1.2T nwere akara ahaziri ahazi F.derailleur SHIMANO TZ500 AFDTY500TSM6 R.derailleur SHIMANO TZ500 ARDTZ500GSD Onye na-agbanwe SHIMANO EF500 21S n'ọnọdu F: R: 2050 Brake F6 disc brake lever SHIMANO EF500 21s agbakwunyere ọnọdụ F: 1800 R: 2050 Taya WANDA W3104 29 ″*2.1BK nwere COMPASS LOGO Inner tube 29 ″*1.95-2.125 A/V R ...
GD-MTB-059 (JL): 27.5 ”Aluminom etiti Moun ...
Okpokoro nkọwapụta ngwaahịa 27.5 ″*16 ″ isi okwu 44*50*110mm ndụdụ 27.5 ″ MD-N791 nkwusioru 25.4mm*28.6*184*enweghị ezé*H = 470mm HEADSET HB-H763 ụdị zoro ezo H = 22.1mm 9PCS ∮28.6*44*30 HANDLEBAR MD-HB023S Riserbar 22.2mm*1.4T*640mm H = 15mm nwere akara Crank setịpụrụ Prowheel MA-AC49 1/2*3/32 ″*24T*34T*42T*170mm Freewheel KANGYUE KFW-884 8PCS na-edobe 13-28T Chain KMC C8 BU/BU 1/2 "*3/32 ″*110 Pedal FP-806B 9/16" nwere bọọlụ na oghere ngosi ...
Nkọwapụta ngwaahịa ngwaahịa 29 ″*18 ”Al alloy Fork 29 '' Inches nkwusiosị diski breeki Isi akụkụ zoro ezo enweghị ụdị, H = 21.4mm Handlebar Al ogologo aka aka 22.2mm*2.0T*720mm Grip Velo, roba Freewheel SHIMANO, ọnọdụ, 11- 36T, cassette Chain KMC, ọsọ 9, 1/2 ″*11/128 ″ Pedal Na bọọlụ, ihe ngosi CPSC Hub Al ED, NOVATEC QR Al ED, NOVATEC Rim Al, STARS, nwere akara okwu 14G ， 45# Steel Inner tube KENDA 29*2.35 ， A/V Taya MAXXIS 2 ...
Okpokoro 20 ″*15 ″ Electric Bike Alloy Frame Fork 20 ″ Al na-enweta nkwusioru na-awụ akpata oyi n'ahụ Handlebar Al riser-bar 22.2mm*2.0T*560mm Meter 36V LCD Saddle Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ, MTB saddle Motor 20 ″ Hall enweghị azụ n'azụ moto 36V*250W EN15194 ： 2017 Batrị 36V7AH lithium kwadoro batrị EN15194 ： 2017 Nchaji oge 3.5h Wiring harness Waterproof Padal Plastic F/R derailleur F.derailleur: SHIMANO TY300 R.derailleur: SH ...
GD-EMB-022 (JL): 2021 Alloy 250W 36V MI ...
Nkọwapụta Ngwaahịa Okpokoro 700C*17.5 ″ Al alloy frame, etiti mouted moto Fork 27.5 Al (enweghị ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ) diski breeki Handlebar ZOOM Al riser handlebar Screen VHD-S18 blue tooth Saddle Leather city bike saddle Motor 36V*250W middle mouted motor Battery 36V 11.6AH sel Samsung zoro ezo batrị Nchaji oge 2A chaja 6 awa Wiring na -enweghị mmiri Pedal Al city bike pedal Derailleur Shifter: ASLM3158RC R.de ...
Agba:… Ihe dịka 100*30*90cm
Ngwa: Oke igwe kwụ otu ebe, Ọdịdị igwe kwụ otu ebe: ụdị ihe dị gịrịgịrị: PVC/nha akpụkpọ anụ: 280*170, ∮7MM sere: na agba agba: ihe agba agba ojii: nchara, ED na -enweghị mgbachi/ejiri mwekota
GD-CFB-002 (RED): ỤLỌ NKE ỌHỤRỤ 20 ″, FOLDING ...
Nkọwa nkọwa: 20 ″ Ọsọ: Okpokoro 7S: ALLOY FRAME 20 ″ Fork: STEEL FORK -20 ”Igwe isi: KZ-H9820 ED Grips: TPR110MM/85MM Mgbanwe mgbanwe: SHIMANO RS25-7 R deraileur: SHIMANO TZ31 HUB: CHINA AnTai BB: KENLI AXIS W/BEARING KL-08A BC1.37 ″*24T AXLE ED L: 119mm Freewheel: CHINA 7S: 14.16.18.20.22.24.28T BK F/R Brake: CHINA MECHANICAL DISC BRAKE Chainwheel: STEEL 1/2 ″*3 /32 '*48T*170mm ...
Ụgbọ ịnyịnya GUODA na-ewu ewu maka ọmarịcha ụdị ha, ogo klaasị mbụ na ahụmịhe ịnya ịnya. Zụta ezigbo ịnyịnya ígwè iji malite ịgba ígwè gị. Nnyocha sayensị na -egosi na ịgba ígwè bara uru maka ahụ mmadụ. Yabụ, ịzụta igwe kwụ otu ebe kwesịrị ekwesị bụ ịhọrọ ndụ dị mma. Na mgbakwunye, ịnya igwe abụghị naanị na-enyere gị aka ịgbanahụ mkpọchi okporo ụzọ ma bie ndụ ndụ obere carbon, kamakwa meziwanye usoro ụgbọ njem mpaghara ma bụrụ enyi na gburugburu.
GUODA Inc. nwere ọtụtụ ụdị ịnyịnya ígwè dị ka ị họọrọ. Anyị raara onwe anyị nye inye ndị ahịa anyị ọrụ nlebara anya kachasị mgbe ahịa gachara.
GUODA (Tianjin) Ụlọ Ọrụ Na -ahụ Maka Sayensị na Nkà na Ụzụ
Sọnde ruo Satọde
24 awa n'ịntanetị
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga -kpọtụrụ gị n'ime 24 awa.